Nadhii Gammadaa: Lafeen qotamee bahe kan Nadhii Gammadaatii? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright MIIDIYAALEE HAWAASAA
Nadhii Gammadaa achi buuteen isaanii erga dhabamee waggoonni hedduun darbaniiru. Iddoo kanatti lubbuun argamaniiru, iddoo kaanitti ammoo awwaalchi isaanii argameera oduun jedhu yeroo garagaraatti as bahuun marii ijoo ta'a.
''Waan abdii nu kutachiisu dhageenye''
''Hanga ammaa guyyaa tokko lubbuun yoo jiraate ijaan ni argina jennee obsinee turre. Kaleessa garuu waan abdii nu kutachiisu dhageenye.''
Baalee aanaa Raayituu yommuu gahanis maanguddotni kaan Nadhiin dargaggoo waggaa 17 tokko waliin naannicha akka dhaqee fi akka argan himanii, ''maqaan dhalootaa koo Qaasim Usmaan Roobaa, maqaan qabsoo immoo Nadhii Gammadaa, hogganaa ABOti,'' jedhee nutti himee ture jedhanii nutti himan jedhan.
''Meeshaa uummata Oromoo fayyadu waanan as kaa'eeru jira waan taheef, fudhachuuf dhufeera. Yoo na ajjeesaniif meeshicha hin balleesiinaa eegaa,'' jedhee akka uummatatti dubbatee ture nutti himan jedhan manguddoo waggaa 70 obboleessi Nadhii Gammadaa.
Yeroodhuma sana humni waraanaa mootummaas farra uummataa warra tahan jechuun, qabanii dargaggoo waliin tures konkolaataa 'Pickup' irra baasuun ajjeesuun boolla tokkotti akka awwaalan kaleessa dhageenye jedhan.
''Yoo dhuguma isa tahe awwaallanneeti sabirii goona''
''Yoo dhuguma isa tahe awwaallanneeti sabirii goona, jechuun obsina kaa! Uummanni illee akka obsu.
Yoo kan isaa miti tahe immoo biyyatu nuuf eeyyame mitiiree deebisnee awwaallakaa.''
Image copyright Miidiyaalee Hawaasummaa
''Odeeffanno akkanaa kana dhagahee hin beeku. Arba Guuguutti qabamuu uummatni kan nutti himaa ture malee.
Guutamaan Baalee deemee achitti du'uu isaa fi Nadiin waraana keessaa hojiif bahee masjiida warra sheeka Guuguu jedhamu bulee achitti qabame kan jedhu qofa dhageenye jedhan.
''Nadhiin maatii [zarii] bal'aa nama qabudha. Ofii koo dhiyeenya kana lakkaa'eera. Maatiin keenya namoota 141 tahu. Beektota, namoota baratantu nu keessa jira. Akkamitti nu dhokatee tura.
Jiraataan aanaa Raayituu maqaa isaa himuu hin feene tokko akkas jedhe ''awwaalli qotame kan eenyu fa'a akka ta'e ni beekna.
Miseensota Adda Bisummaa Oromoo 2 tu achitti awwaalame. Kan jaal Nadhii miti,'' jedhu.
Waarana Mootummaa fi Loltoota Bilisummaa Oromoo gidduu tureen, Tullee Daadhii fi dhalataa Aanaa Raayituu kan ture Gumaabaas Furgaas ta'uu hawaasni naannoo fi mootummaanis ni beeku,'' jedha.
'Awwaalli sun kan Nadhiiti jedhanii uummatatti himuun sirrii miti'
Awwaalli sun kan Nadhiiti jedhanii uummatatti himuun sirrii miti jenna.''
Koreen kunis maatiifi hiriyoota Nadhiin kan hundaa'efi mootummaa waliin hidhata kan qabu miti.
Bu'aa kanarra kan gahanis odeeffannoo namootarraa argameen, akkasumas suuraa erga Nadhii Gammadaan wareegamee ka'e jedhame ilaaluunifi odeeffannoo kanneen biroo sassaabaniin tahuu BBCtti himaniiru.
''Namoota yeroo dheeraaf dhimma kana hordofan, odeeffannoo harkaa qabanis argannee waliin mari'annee, maatii waliinis mari'achuun murtee kanarra geenye, '' jedhu Birgaader Jeneraal Kamaal.
Haa tahu malee hanga ammaatti guutummaatti mirkaneeffachuun hin danda'amu jedhu.
''Dhibbaa dhibbattis mirkanneeffachuu baannu, odeeffannoon jiran garasitti nama geessu.
Erga boqotee waggaa dheeraallee tahuu, lafeenis ni argama. Karaa saayinsaawaan qoratamee isamoo isaa miti kan jedhu addaan baafachuu qabna jennee murteessinee, garas imalle,'' jedhu.
Kana malees, ''DNA'n isaa ilaalamuu qaba. Kanaan mirkanaa'uu qaba. Haasawaa qofaan isa jennee fudhachuu hinqabnu,'' jedhu.
Nadhiin yoom du'e?
Guyyaa sa'aa sagalitti qabamee, galgala sa'aa 1tti ajjeefame.
'Itoophiyaa keessatti namoonni mana hidhaa hiikaman deebi'anii hidhamaa jiru'
Janaraal Birhaanu Juulaa ajjeesuf karoorri akka ture Abbaan Alangee ibse
Lagni Kooriyaa dhiiga booyyeen diimaatti geeddarame